Metal Laser eqopha Machine, Plywood Co2 Laser umsiki - Shenya
Umshini wokusika we-Laser CO2
Umshini wokusika we-Laser ongu-1390
Umshini wokusika we-Laser we-1610
Umshini Wokusika i-Laser we-6090
1325 Woodworking lokuqopha umshini
Umshini wokusika umzila we-1530
Umshini wokusika we-Router we-6090
Umshini Wokusika i-Plasma ka-1530
Umshini wokusika wePlasma ka-1560
Umshini Wokusika i-Plasma ka-2060
Umshini wokusika we-Laser Laser we-4515
Umshini we-Laser we-6090
Umshini we-Laser we-1610
1325 Umshini we-Laser
Umshini we-Laser we-1390
1325 CNC Umfanekiso oqoshiwe Machine
Izinga le-R & D
Ngokuqhubekayo lidlula izinga locwaningo lobuchwepheshe nentuthuko
Kwenziwe ngentando; unake, ubungcweti; umklamo ohlakaniphile; ukukhiqizwa okuhlakaniphile
Sifuna abathengisi nabalingani emhlabeni wonke
Ukuthengisa okuqondile kwefektri, imikhiqizo enemba kakhulu, ubuhlakani obuphezulu, iphephile futhi ihlala isikhathi eside.
ISHENYA CNC ibilokhu izinikele ocwaningweni, ekuthuthukisweni nasekukhiqizeni imikhiqizo ye-CNC ehlakaniphile njengokumaka, ukubaza nokusika imishini. Ngemizamo yethu engapheli, uShenya CNC usethuthukile waba yinkampani enkulu yokukhiqiza esezingeni lomhlaba manje. Imikhiqizo ngokunemba okuphezulu, ukuhlakanipha okuphezulu, ukuphepha kanye nokuqina kanye nohlelo lokuqinisekisa ukusebenza okuhle kakhulu olunenkathazo kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva kokuthengisa ngokucophelela futhi ephelele, izuze isikhundla esiphambili seShenya CNC embonini…
Ukusika Kwensimbi Yekhabhoni
Ukusika Insimbi Yethusi
Ukuzisika Kwensimbi Engagqwali
Ukusika Incwadi Nge-Acrylic
Laser eqoshwe Wood
ISHENYA inikezela ngosizo lwangaphambi kokudayiswa kwesevisi nangemva kokuthengiswa kwenkonzo yaphesheya;
Uma ufuna ukufunda ukusebenzisa umshini, ungafika enkampanini yethu futhi sizokufundisa mahhala;
Futhi ngemuva kokuthenga umshini wethu, uma ukulungiswa kudingeka, sizokusiza on-line noma ukuthumela onjiniyela ukukunikeza ubuso nobuso insizakalo emhlabeni wonke.
Yiziphi izinto ezifanele umshini wensimbi we-laser cutting
Yiziphi Izinto Ezifanele Umshini Wokusika we-Laser Laser Ukuzalwa komshini wokusika we-laser yensimbi ikakhulukazi ukuthuthukisa ukusebenza kahle nokusika ukunemba. Kepha ukusebenza kahle okuphezulu nokunemba okuphezulu kukude kakhulu nalokho umuntu o ...
Yiziphi izici ezithinta laser lokuqopha?
Yiziphi Izici Ezithinta Ukuqoshwa Kwe-Laser? Ama-Lasers angenza izinhlobo eziningi zemishini. Njengokwelashwa kwendawo okushisa ngayo izinto, ukushisela, ukusika, ukushaya isibhakela, ukudweba kanye ne-micromachining. CNC laser lokuqopha umshini proc ...
Amaklayenti aseMelika athole i-oda lokuqala
I-America Clients Ithole I-oda Lokuqala Ngo-Ephreli 26, sathola ifomu lokubuza ngqo kumakhasimende aseMelika uMnu Fip. Izidingo zamakhasimende: Unganginikeza isilinganiso somshini owodwa, ukulethwa endlini ngendlu, eCalifornia / e-USA. Futhi ple ...
Izindlela Ezihlukahlukene Zokusika Zomshini wokusika we-Laser
Izindlela Ezihlukahlukene Zokusika Zokusika Umshini Wokusika I-Laser yindlela yokucubungula engeyona yokuxhumana namandla aphezulu nokulawula ukuminyana okuhle. Indawo laser ngamandla okusezingeni eliphezulu kwabantu kwakheka ngemuva ukugxila laser bea ...